ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဥယျာဉ်ရေကူးကန်ပစ္စည်း - အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သော PVC တာပေါ်လင်အထူ - ၀.၆ မီလီမီတာ - ၁.၂ မီလီမီတာပုံသဏ္:ာန် - အဝိုင်း၊ စက်ဝိုင်းအဖြစ်များသောအရောင် - မီးခိုးရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အခြားအရောင်များ ODM / စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအားသာချက်များ - ၁။ မြင့်မားသောခွန်အား၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ အပူခံနိုင်ရည်အားသာချက်များရှိခြင်း။ 2. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုကွဲအက်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်အက်စစ်၊ အယ်လကာလီ၊ အော်ဂဲနစ်အရည်များစသည်တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 3. အိုမင်းခြင်းကိုခံခြင်း၊ ချေး ...
ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပစ္စည်း: အဆိပ်မရှိသော PVC တာဗလင်းအထူ - 0.6mm – 1.2mm ပုံသဏ္Shာန်: Round / Circle အရောင် - မီးခိုးရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဖြူနှင့်အခြားအရောင်များစွမ်းရည် - 250L 500L 750L 1000L 2000L 3000L 5000L 10000L OEM / ODM / လက်ခံသည် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းအားသာချက်များ ၁။ မြင့်မားသောခွန်အား၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုကွဲအက်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီ၊ အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များစသည်တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ..
TPU (polyurethane) -coating ထည်
တင့်ကားများကို PVC / TPU ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအားဖြည့်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတိုင်ကီပြည့်သွားသောအခါခေါင်းအုံးပုံစံကိုပြသည်။
၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရေ၊ မီးရေ၊ မိုးရေရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ဆည်မြောင်းရေ၊ ကွန်ကရစ်ရောစပ်ထားသောရေ၊ စိမ်းလန်းသောရေစောင်းသိုလှောင်ခြင်း၊
၎င်း၏အားသာချက်များမှာ - ဗလာဖြစ်သည့်အခါခေါက်။ လွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ နေရာတွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးသက်တမ်းရှည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နည်းပါသည်။
TPU အတွင်းပိုင်းကော်အလွှာတစ်ခု၊ ထည်ဖြင့်အားဖြည့်ထားသောအလွှာနှင့်အပြင်ဘက်ကော်ကော်တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါထည် - အားဖြည့်အလွှာကို polyester အမျှင်များမှဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းနှင့်ပြင်ပကော်များကိုထည်အားဖြည့်ထားသောအလွှာ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် polyurethane ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက် Cylindrical Water Tank ကို PVC / TPU ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအားဖြည့်ထားသောထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတိုင်ကီပြည့်သွားသောအခါဆလင်ဒါပုံစံကိုပြသသည်။ ၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရေ၊ မီးရေ၊ မိုးရေရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ဆည်မြောင်းရေ၊ ကွန်ကရစ်ရောစပ်ထားသောရေ၊ စိမ်းလန်းသောရေစောင်းသိုလှောင်ခြင်း၊ ၎င်း၏အားသာချက်များမှာ - ဗလာဖြစ်သည့်အခါခေါက်။ လွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ နေရာတွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးသက်တမ်းရှည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နည်းပါသည်။ နေ ...
rectangular tank ၏အထူးသည်ခေါင်းအုံးနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်း၊ ရေနံနှင့်အခြားဆက်စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏စွမ်းရည်ကြောင့်၎င်း၏ပုံသဏ္ofာန်အရှိဆုံးတိကျသည်။ ဒါ့အပြင်ခေါင်းအုံးကန်ထက်ပစ္စည်းနည်းတယ်၊
ကြက်သွန်တင့်ကားသည်သူ့ဟာသူရပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုငါးမွေးမြူရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့်ရေသိုလှောင်ရန်အိမ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အပူပိုင်းမိုးခေါင်သောနေရာတွင်အဆင်ပြေပါသည်။
မြေပြင်အထက်ရေကူးကန် / လှိုနိုင်သောရေကူးကန်များအခြားအမည်သတ္တုဒြပ်ထုရေအရင်းအမြစ်ရေကန်၊ ကြီးမားသောအပြင်ဘက်ရေကူးကန်ပစ္စည်းမဟုတ်သောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့် PVC တာယာထိုးအထူ ၁.၀ မီလီမီတာ - ၁.၅ မီလီမီတာပုံသဏ္Rာန် / ထောင့်ကွက်၊ အစိမ်း၊ အဝါ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဖြူနှင့်အခြားအရောင်များစွမ်းရည် 1000L 5000L 10000L 20000L 50000L 100000L သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောဘောင်ခတ်ထားသည့်သံမဏိပိုက်“ I”” U” အမျိုးအစားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (ရွေးချယ်စရာရှိ) ရေစစ်စက်စုပ်စက်၊ ရေကန် Cove .. ။
A-1 ခေါင်းအုံးရေတိုင်ကီတင့်ကားများကို PVC / TPU ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအားဖြည့်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတိုင်ကီပြည့်သွားသောအခါခေါင်းအုံးပုံစံကိုပြသည်။ ၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရေ၊ မီးရေ၊ မိုးရေရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ဆည်မြောင်းရေ၊ ကွန်ကရစ်ရောစပ်ထားသောရေ၊ စိမ်းလန်းသောရေစောင်းသိုလှောင်ခြင်း၊ ၎င်း၏အားသာချက်များမှာ - ဗလာဖြစ်သည့်အခါခေါက်။ လွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ နေရာတွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးသက်တမ်းရှည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နည်းပါသည်။ အောက်ပါအတိုင်းအတိုင်းအတာ ...